भारतमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ कर छलीमा मुछियो साओमी, यस्तो छ कारण « Tech News Nepal
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमी भारतमा १० अर्ब भन्दा बढी कर छलीमा मुछिएको छ ।
भारतको डाइरेक्टोरेट अफ रेभिन्यू इन्टेलिजेन्स् (डीआरआई) ले गरेको अध्ययनबाट साओमी टेक्नोलोजी इन्डिया प्रा‍.लि. (साओमी इन्डिया) ले राजस्व छली गरेको फेला पारेको हो ।
भारतको अर्थ मन्त्रालयले साओमी इन्डियाले ६.५३ अर्ब भारु (१० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ) कर छली गरेको भन्दै सूचना जारी गरेको छ । यसअघि साओमी इन्डियाले भन्सार छली गरेको भनी जानकारी प्राप्त भएको भन्दै डीआरआईले अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
साओमी इन्डियाको मुख्य कार्यालयसहितका अन्य स्थानमा छापा हानी त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएको विभिन्न कागजातका आधारमा डीआरआईले राजश्व छली भएको सरकारी दाबी छ ।
डीआरआईका अनुसार साओमी इन्डियाले क्वाल्कम र बेइजिङस्थित साओमी मोबाइल सफ्टवेयर कम्पनीसँग भएको कारोबारमा रोयल्टी तथा अनुमति शुल्क थप नगरेको पाइएको हो ।
साओमीसँग सम्बन्धित अन्य कन्ट्याक्टर कम्पनीहरू पनि कर छलीमा मुछिएका छन् । ‘कारोबार रकममा रोयल्टी तथा अनुमति शुल्क थप नगरी सोओमीले मोबाइल तथा त्यसका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा आयात गरिरहेको पाइएको छ,’ भारतको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
उक्त सूचना अनुसार यो क्रम २०१७ अप्रिलदेखि नै चल्दै आएको थियो । सन् २०२२ को जुनसम्ममा साओमीले कूल ६.५३ बिलियन भारु भन्सार छलेको देखिएकाले थप कारबाही अघि बढाइएको मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ ।
यो विषयमा साओमी इन्डियाले पनि सरकारले पठाएको पत्रको आधारमा आन्तरिक रुपमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । साथै सरकारलाई यो अध्ययनमा थप कागजात उपलब्ध गराएर आवश्यक सहयोग समेत हुने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।
केही व्यक्तिहरू सार्वजनिक स्थलमै किन हेर्ने गर्छन् पोर्न सामग्री ?
काठमाडौं । ब्राउनवेन रिड बेलायतको एउटा सार्वजनिक लाइब्रेरीमा बसिरहेकी थिइन् र अन्य छात्रले जस्तै त्यहाँ
यसरी डुब्न सक्छ १७ हजार क्रिप्टोमा भएका सबै लगानी, ईयूले दियो यस्तो चेतावनी
काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सीमा गरेको सबै लगानी डुब्न सक्ने भन्दै यूरोपियन यूनियनले उपभोक्तालाई चेतावनी दिएका छ
एप्पलका सीईओ टिम कुकको पारिश्रमिक कति ?, काम भन्दा पैसा बढी लिएको आरोप
काठमाडौं । एप्पललका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टिम कुकले गत वर्ष ९९ मिलियन डलर (११